Oromoo fi Oromiyaan Bilisomsuu malee furmati birra hin jiru.
Sabi Bilisummaa hin qabnee ajeefamuu, hidhamuu fi dararamuun isaa hin oluu.
Wagoota 400 ol dhiiga Oromoo dhangala’aa jiru dhaabbuu qabna.
Getachew Jigi Demekssa Dr. Kutaa 1faa
Waggoota 400 ol Oromoon Habasha waliin dhigga wal dhangalasa ture, keesumati wagoota 140 amoo habashoon Oromoo yaakka gosa hunda irrati raawwata jiru. Yakka isaan saba Oromoo irrati dalagan hanga tokko kitaba koo ''Bu’aa Bayii Qabsoo uummata Oromoo Siirna garbuamaa irraa gara Bilisummaatti'’ jeedhu keessati ibsuu yaalen ture. Oromoo fi Oromiyya bilisoomsuun dirqama, kana ala furmatii birran akka hin jire itti fufen bareesun uumataa Oromoo hubachisuun feedha. Waan ani bareesu gagababsen bareesuu yaala. Bilisummaan murtessa ta’uu isaa Oromoo hundi irrati wali gala, Bilisummaa kan mormuu yoo jiratee diina fi wara gara isheef bultee ergamtu diina qoofa. Bilisummaa kana fiduuf ga’een keenya malii kan jeedhu ilaalun barbachisadha.
Bilisummaan dhufu kan hunda keenyati. Kanaafu lammiin hundi ga’ee isaa ba’uu qaba. Media Oromoo (Gazeexesstoon Oromoo), Artistoon Oromoo, Hayuuleen Oromoo, Jarsooliin Oromoo, Qabsa’oon diree jiran (Loltun Oromoo), Dhabbileen siyyasa Oromoo, Dargagoon fi Shamaran Oromoo, Qeeroon Baratoota Oromoo, Qootee bula fi Daldaltoon Oromoo, Hojeetan mootummaa, Dafiqaan bulaan Oromoo hundi dirqama qabuu. Dirqama kana ani waanin of yaadu xuxuquun yaala warii dubiftan amoo yaada na lachuun na siiresitu, kun walti cunfamee dhalotaf waan barbachisuu yaadi waliigala tokko bilichaatee ol ba’uu danda’aa.
Akumma beektan waarii siiyassa wayee isaa darbee ni dubsuu male wa'ee isaa darbee hin bareesan, wa'ee isaa dhufuu bareesuu, wa'ee isaa darbee qooratani kan bareesan waraa seenaati. Dameen siyyasa yeero bayee isaa darbee qoorachuun isaa dhufu akeekuu ykn xinxaluu, siyyasa xinxaluu ykn tilimamun fi akkeekun dhukubasata qooratan dhukuba isaa arguu caalaa nama rakkisa. Sababin isaa laboratooriin siyyasii itti qoratame dhukubi isaa ittin argauu hin jiru, akkuma amala qileensa ykn buubee fi dha’aa gaalanaa irra ka’uu kara ni dhufa jeedhan dhisee jijirachuu mala. Siyyasi adunya irrati deema jiru jeequmsii fi biyyi meeqa diigamaa jiru kun ni digamuu jeedhamee hin yaadamne ture. USSR, Yegoslaviya, Irqa, Libya, Siriya, Somalia kkf waan deema ture fi deema jiru amalee wara siyyassa dhiphisa jira. Kanaafu xinxalii fi tilimami siyyassa hundi bakka yaadamee ni ga’aa jeechun nama rakkisa. Garuu rakko dhufu dura tilimamun balaa sun xiiqeesuu danda’aa itti qoopha’uuf nama gargara.
Bareefama koo kana keessati gartuu ani babsuuf (irra caalsfadhuu) hin jiru, waan Oromoof malu ykn fayada jeedhe of koof yaadun bareesa, nama dhunfa ykn gartuu tokko midhuuf ilee kayyoo hin qabu. Amoo waan Oromoo degeruu utuun of hin qusatiin raawwadha, wa'ee Oromoo irrati walaba ta’ii ykn nutaral ta’ii nami nan jeedhu yoo jirate hin fudhadhu. Adunya kana irrati Neutrality, Democracy, rule of law, human right, kkf jeechun warii gura nu duchan hundi isaani waan isaa raawwatan yoo madalee harkii caaluu soba. Median, Mootuummaa fi dhaabbilee adunya tokko tokko nu walabaa, nu demokrasy fiduuf, nu heera fi seera kabachisuuf, mirga dhala nama egsisuuf jeedhu, lafa irrati yeroo ilaalun waan dhugan raawwatama hin jiru. Nuun nu gorsa of isaanti waan barbadan dalaguu. Nuun Amanta nu barsisa of isaanti faallaa amanta dalaguu. Faranjoon biyya keenya keessati amanta lalaban biyya isaanti nami walda deeme waqayoon kadhatuu hin jiru. Walda Amanta beekama fi gudaa tokko keessa nama 3 ykn 5 qoofatu ta’ee waqeefatee gala.
Waan ani kana kassef Oromoo waan tokko yeero dubatuu kun cubudha, kun mirga nama dhiibuu dha, kun seera cabsuu dha, kun demokrasi faleesudha kkf sababa dhiyeesudhan of takalani nama takaluu. Media Habasha yeroo Oromoo xiqeesan, Prof. Habasha Oromoon isiin Oromoo miti gaalaa dha yeero jeedhe Oromoo Millioona 55 salphisuu, median Oromoo heedun nu media walabati gara tokko hin qabanu, wa'ee saba biraa hama hin dubanuu, wa'ee dhaabba siyyasa kamuu hama hin dubanuu, enyuun ilee hin balalefanuu jeedhu. Median Habashoota Oromoon uumataa nama fayyaa qaluuti fakeessun dirama isaa hojeetan ilee median hin falmanuu jeeduu. Media Oromoo ta’aan utuu jiran Oromoo saba birra wal qixaa ilaluu qabna fi kkf heedu dhagaa'a jira. Kara bira ammoo of “Neutrality” keenya egana jeechun Dhaabbilee Oromoo wagoota 40 qabsoo keessa jiran ala qabuu, saboontoota Oromoo yaada isaan ukamsuu, yaakka diini Oromoo irrati dalaguu sababa adda addan qileensa irra akka hin olee goochuu walabumaa miti, xifumayuu uumata kooti kan ittin jeedhan of dagachisuudha. Yeroo amma ammoo warii mila isaani bakka lama dhaabani jiran yakka habasha balalefachuun hafnan Habashan waliin hojeechun furmata fidaa jeechun qabsoo Oromoo busheesuu yaalu. Kun siirachuu qaba, “keenyan kan waraati kootiin kan ofiti “ jeedha Oromoon. Waan Artist Ali Bira Marii Artistota Oromoo irrati dubate dhagefadha,” Habashoon Media Mata isaan qoofat qabuu, ETV ilee nu dhorkatan qoofa isaan fayadamuu TV Oromiyya Moomtuuman Naannoo Oromiyya ijaratee ammoo iti fayadamuu qoofa utuu hin tanee itti udanani iti fincanani” jeedhe.
Median walaba Adunya irra hin jiru adunya keessa kana akka media gartuu qabatee abida siyyasa gazii itti naqee bobeesuu iyuu hin jiru. Kan akka media wara hin barbanee sagalee isaani ukamsee, dhugga isaan dhoksee, adda isaani xureese dhiyeesuu hin jiru. Artistoon Oromoo lama Mirheti waldamaryam (Haadha Shubee fi Amin Hussen Median Ethiopia fi ETV akkasuma Oromiyya Tv dabalatee Artistoota Oromoo akkamin akka isaan hacucan, dararan fi hamilee isaan cabsan beela fi rakkof saxilan ibsaa isaani irra dhageessan jirtu, Artistoon Habasha Miliyener yamuu ta’aan Artistoon Beekamoo Oromoo hundi Kolonel Sahaile Dagagoo tii kasee hanga Lagassa Abditi rakkatan beellaan akka du’aan beekamadha, Artistoon Oromoo media irra umurii gutuu dhorkaman akka Zerihun Wadajoo du’uu diidan malee Mootumman wayyane fi Median Ethiopa hojii dhorkee beellaan ajeesuuf du’aa erga irrati murtese wagga 23 ta’ee jira. Median walaba essa jira?
Kutaa 2faan itti fufa
burqaa1960@yahoo.com yaada fi gorsa keessan gumacha